angel ၀ ံဂေလိခရစ်ယာန်ကောလိပ်များမှကျောင်းသားများအကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေအသုံးပြုမှုကိုစစ်ဆေးခြင်း (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်သည်
“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုခံစားနေရခြင်း - တစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့်အချိန်ကာလအားဖြင့်ဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်ခြင်း” ၏ဝေဖန်မှု (၂၀၁၅)
Chelsen, ပေါလု O.
ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်ကောလိပ်များမှာအထီးကျောင်းသားများအကြားအင်တာနက်ကညစ်ညမ်း access ကိုနှစ်ခုပြဿနာများတွေ့ရမယ်။ ပထမဦးစွာအင်တာနက်ညစ်ညမ်း access ကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးသဘောအရလိင်တစ်ဦးကမျြးစာအမြင်အပေါ်အခြေခံပြီးတားမြစ်သည်။ ဒုတိယအကြပ်အတည်းဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းအစဉ်အလာများ၏အခြေအနေတွင်သညျယရှေုခရစျ၏သင်ကြားမှုကိုလိုက်နာဖို့ရှေးခယျြသူတစ်ဦးချင်းစီကျောင်းသားများကိုအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း access ကိုတုန့်ပြန်ပြည်တွင်းရေးဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့ကြုံခံစားနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ယနေ့အထိအဘယ်သူမျှမပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှုသာသာဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်ကောလိပ်များမှာအထီးတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်း access ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအလမ်းပြသုတေသနဆိုတဲ့မေးခွန်းကို "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်း access ကိုအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအတွက်ရွေးချယ်ထားသောဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်ကောလိပ်များမှာအထီးတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာလုပ်ဖို့?" ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယလမ်းပြသုတေသနဆိုတဲ့မေးခွန်းကို "ဖြစ်ပါတယ်အထီးတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်၏အတိုင်းအတာများအကြားတစ်ဦးဆက်စပ်မှုရှိပါသလား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းအတွက်ရွေးချယ်ထားသောဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်ကောလိပ်များမှာစွဲပုံစံများ, အွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ဒုစရိုက်ဖြေနှင့်သဘာဝလူမှုရေးကြောင်းအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ညွှန်းကိန်း? " ဤသည်မှာဆက်စပ်မှုလေ့လာမှု 46 မေးခွန်းများကိုအတူအွန်လိုင်းမှစစ်တမ်းမှတဆင့် data တွေကိုစုဆောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းသုံးခုကွဲပြားခြားနားသောဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်ကောလိပ်များမှာ 2,245 အထီးဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကိုထံသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်.
လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းလက်လှမ်းနှင့် ပတ်သက်. ဒုက္ခဆင်းရဲအတွက်အထီးကျောင်းသားများကိုကူညီပံ့ပိုးရန်ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်ကောလိပ်များဒီဇိုင်းနည်းဗျူဟာမှာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များကိုကူညီသတင်းအချက်အလက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုများအတွက်ပံ့ပိုးမှုကျောင်းသားများကိုအပေါ်သက်ရောက်မှုများအပါအဝင်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းနှင့် ပတ်သက်. ကောလိပ်ကျောင်းသားသဘောထားများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ပင်ကိုယ်မူလစာပေ၌တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်ထောက်ခံမှုကောလိပ်ကျောင်းသားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်လိင်မလှူ ပတ်သက်. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်မလှူအပေါ်ယေဘုယျအားစာပေနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပင်ကိုယ်မူလစာပေနှစ်ခုလုံးကနေရောက်လာတယ်။ အဆိုပါဖော်ပြရန်စာရင်းအင်းရလဒ်များကို 79.3 ရာခိုင်နှုန်းကိုအပတ်တိုင်းအချိန်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှာအနည်းဆုံးအချို့ငွေပမာဏကိုရယူသုံးဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်အတူဧဝံဂေလိကောလိပ်များမှာအထီးဘွဲ့ကြိုကျောင်းသား 61.1 ရာခိုင်နှုန်း, ယခင်တစ်နှစ်အတွက်တစ်ချိန်ချိန်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအားဝင်ရောက်သတင်းပို့သောပထမဦးဆုံးသုတေသနဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်ကူညီပေးခဲ့သည်များနှင့်သရုပ်ပြ ။
linear ဆက်ဆံရေးနှင့်မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဒုတိယသုတေသနမေးခွန်းကိုဖြေဖို့ဒေတာကိုထုတ်လုပ်ပြီး။ တစ်ဦးကကစာရင်းအင်းသိသိသာသာဆက်ဆံရေးဟာအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းအပြစ်ရှိတယ်နှင့်သဘာဝလူမှုရေးကြောင်းအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောသုံးဧဝံဂေလိကောလိပ်များနှင့်စွဲလမ်းပုံစံများညွှန်းကိန်းမှာအထီးတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏အတိုင်းအတာများအကြားတည်ရှိ.
ထို့အပွငျ, အဆိုပါမျိုးစုံဆုတ်ယုတ်ရလဒ်များကိုခြုံငုံ, ဧဝံဂေလိအဖြစ် Self-ခွဲခြားသတ်မှတ်အွန်လိုင်းအချိန်မြင့်မားတဲ့ပမာဏဖြုန်း, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲမြင့်မားအညွှန်းကိန်းကိုသရုပ်ပြနှင့်သဘာဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင်းအွန်လိုင်းလူမှုအပြုအမူကိုသရုပ်ပြဘူးသောကျောင်းသားများအမြင့်မားသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဝင်ရောက်ဖို့ကပိုများပါတယ်ကြောင်းအကြံပြု နာရီအပတ်တိုင်းအရေအတွက်။ အဆိုပါစွဲလမ်းစကေးအချိန်ပမာဏကိုများအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးခန့်မှန်းအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာ, ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီရက်သတ္တပတ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုနေခဲ့ရသည်။
descriptor များကို: လိင်, လူမှုအပြုအမူ, စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, ကျောင်းသားသဘောထားများကို, စိုးရိမ်ခြင်း, အင်တာနက်ကို, ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများ, ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း, သတင်းအချက်အလက်ရယူသုံးစွဲနိုင်, အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများ, ကျောင်းသားစစ်တမ်းများ, အကွိမျမြားစှာ Regression အားသုံးသပ်ခြင်း, ဆက်စပ်မှု, အဆင့်မြင့်ပညာရေး, ဘုရားကျောင်း Related ကောလိပ်များ, ယောက်ျား
ထုတ်ဝေအမျိုးအစား: စာတမ်းများ / စာတမ်းများ - ပါရဂူဘွဲ့စာတမ်း
ပညာရေးအဆင့်: အဆင့်မြင့်ပညာရေး; Postsecondary ပညာရေး
အကြံပြုကိုးကား Chelsen, Paul Olaf၊ “ angel ၀ ံဂေလိခရစ်ယာန်ကောလိပ်များမှကျောင်းသားများအကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေအသုံးပြုမှုကိုစစ်ဆေးခြင်း” (၂၀၁၁) ။ စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း။ စက္ကူ 150 ။ http://ecommons.luc.edu/luc_diss/150